Category admin – Cayaaraha dunida
11 Maarso 2018. Zidane ayaa dib ugu soo laabtay Real Madrid isagoona la gaaray heshiis gaaraya ilaa 2022 kaddib markii la ceyriyay Solari. 284 maalmood oo qura ayaa laga joogaa markii uu Zidane iskiis More...
11 March 2019. Real Madrid ayaa si rasmi ah ugu dhawaaqday in Zinedine Zidane uu dib ugu soo laabtay shaqada kooxda Los Blancos, isla markaan uu kooxda hogaamin doono laga bilaabo bari oo Talaado ah, kadib More...
11 March 2019. Inta badan kulamadii 30-aad ee horyaalka Premier League xilli ciyaareedkan 2018-19 ayaa la ciyaaray, iyadoo uu hoggaanka gooldhalinta horyaalka Serie A la wareegay Weeraryahanka kooxda Manchester More...
2 March 2019 kooxda Manchester City ayaa guul dirqi ah ka gaartay kooxda Bournemouth kaddib ciyaar ku soo dhamaatay 1-0. Qeebtii koowaad ee kualna kooxda Manchester City ayaa ku dhameesatay iyada oo More...
3 March 2019 Kooxda Barcelona ayaa guul dirqi ah ka gaartay kooxda Real Madrid kaddib markii ay kaga adkaadeen gool madi ah oo yimid qeebtii koowaad ee ciyaarta . Qeebtii koowaad ee kuanka More...
kooxaha Tottenham iyo Arsenal oo is mari waayey kulankoodii North Londone Derby.
2 March 2019 Kooxaha Tottenham iyo Arsenal ayaa is mari waayeey kaddib ciyaar ku soo idlaatay 1-1 oo ka tirsaneed horyaalka Premier League . Qeebtii koowaad ee kulanka ayaa ahaa mid aad u xiiso badan More...
Goolhaye Kepa oo Dhibaato wayn ka dhex abuuray Chelsea…
26 Feb 2019. Falkii Amar diidada ahaa uu sameeyay Kepa Finalkii Carabao Cup ay City Rigoorooyinka ku qaaday Manchester City ayaa dhibaato ka dhex abuuray Chelsea iyadoo ay labo saf u kala jabeen xididgaha More...
03 Dis 2018. Luka Modric ayaa caawa loo caleemo saaray Ballon d’Or iyadoo ugu dambeyn saaxada laga waayay Lionel Messi iyo Cristiano Ronaldo. Labada laacib ayaa min shan jeer ku guuleystay Kubbada Dahabka oo More...
November 21, 2018 Isboortiga waa awood wax weyn ka bedeli karta dunida aan ku nool nahay,waxay leedahay awood ay ku mideyso dadyoowga caalamka,waxay geesinimo gelisaa jiilalka soo koraayo iyadoo ka weecineyso waxyaabaha More...
15 .11.2018. Doorashadii 7-aad xiriirka kubadda Cagta Soomaaliya ayaa ka dhacdey Magaalada Muqdisho waxaana kusoo baxay Gudoomiyihii xilkaasi soo hayey afartii sano ee lasoo dhaafay C/qani Saciid Carab oo markale More...